Haezer Album Chivharo Art - Dhizaini magazini
Album Chivharo Art
Album Chivharo Art Haezer anozivikanwa nekuda kwake akasimba bass kurira, epic kutyora ane zvakanaka akasvibiswa mhedzisiro. Iyo ndiyo ruzha rwemhando inouya seyakananga kumberi mimhanzi yekutamba, asi paunenge uchiongorora kana kuterera unotanga kuona marita akawanda eaya mukati mechakapedza chigadzirwa. Kune iyo pfungwa yekugadzira uye kuita basa raive rekuenzanisa ruzivo rwekuziva rwainzi Haezer. Maitiro emhanzi haatombori akajairika kutamba kwemimhanzi dhizaini, nekudaro achigadzira Haezer rudzi rwezvake.
Zita rechirongwa : Haezer , Vagadziri zita : Chris Slabber, Izita remutengi : CS Design & Illustration.
Album Chivharo Art Chris Slabber Haezer